Makungabi nokwenzelela kwabaphula oweCovid19 - Ilanga News
Home Izindaba Makungabi nokwenzelela kwabaphula oweCovid19
Makungabi nokwenzelela kwabaphula oweCovid19
ISIMO esibi emhlabeni sokugutshuzelwa yifu lokhuvethe oluwubhubhane “uqothizizwe” (coronavirus), sesiveze lukhulu ngokuziphatha kwabantu bakuleli, okuhle nokubi, esingabala lapha abezokuphepha nongqongqoshe bakahulumeni imbala.
Ngokukahulumeni nezinhlangano ezizimele, ukuvalwa kokudayiswa kotshwala kuzo zonke izindawo sekube nomthelela omuhle wokwehlisa isibalo sokuhlaselwe nokubulawa kwabantu, ikakhulukazi ngezimpelasonto. Kanjalo nesibalo sokufa kwabantu ezingozini zomgwaqo, okuvamise ukwenzeka ngempelasonto yePhasika, kwehle kakhulu ngenxa yokungabi khona kwezimoto eziningi emi-gwaqweni yezwe.
Kufanele sifunde lukhulu kulokhu, kuthi noma isikhathi sesibuyele kwesejwayelekile emuva kokudlula kwalolu khuvethe lukaqothizizwe, sikwazi ukugcina isibalo soku-bulawa kwabantu sisezingeni eliphansi, kanjalo nezingozi zomgwaqo.
Okubi esikufundayo ngalesi sikhathi wukuthi abezokuphepha (amaphoyisa namasosha) kabawahloniphi amalungelo abantu. Izinkundla zokuxhumana zigcwele ama-video, lapho lezi zinhlaka zikahulumeni zihlukumeza abantu ngokubashaya noma zibaphuce ukudla kwabo ngoba kuthiwa bephule imithetho kahulumeni ephoqa abantu ukuba bagonqe emizini yabo kuze kube wumhla ka-30 kuMbasa (April).
Kwesinye isigameko esinobulwane, amaphoyisa abonakale enika izinja inyama esebhodweni, ebikade iphekiwe. Yebo, kufanele ukuba abezokuphepha bawenze umsebenzi wabo wokubopha labo abephula umthetho, noma babanike izexwayiso.
Kodwa ukuthela induku umnumzane womuzi wakhe noma umama wekhaya bezihlalele egcekeni lomuzi wabo ngoba kuthiwa baphula umthetho ngokuba segcekeni, kakubukeki kuhambisana nomthetho nobulungiswa.
Kuyaxaka ukuthi phezu kobufakazi obuqhubekayo buvela ezinkundleni zokuxhumana bama-video akhombisa ukuhlukunyezwa kwabantu, kodwa uhulumeni akezwakali ekhuza izisebenzi zakhe ukuba zihloniphe amalungelo abantu.
Kulabo asebebekwe amacala, njengomakoti nomkhwenyane baseNseleni ngaseMpangeni, esabika ngabo ngeledlule beshaqwa ngabezokuphepha bephakathi nomcimbi wabo, sibheke ngabomvu ukuthi amacala abo azoqhubeka yini, bashushiswe.
Sikusho lokhu ngoba phela kunongqongqoshe ababili ababukeka bephule imithetho kahulumeni yokugonqa, uNkz Lindiwe Sisulu noNkk Stella Ndabeni-Abrahams, kodwa bona kabakaboshwa.
UNkk Ndabeni-Abrahams usemiswe emsebenzini izinyanga ezimbili wumengameli Cyril Ramaphosa emuva kokuba evakashele umngani wakhe, uMnu Mduduzi Manana, emzini wakhe. Ngokwenzenjalo wephula umthetho obekiwe, ongavumeli ukuba izakhamizi zivakashelane ngalesi sikhathi.
Kakukashiwo lutho ngoNkz Zulu. Umbuzo olandelayo uthi, yingani bona bengaboshwa njengawo wonke umuntu owephule umthetho? Ngeke kube wubulungiswa ukuba abantukazana bona bashushiswe kodwa omntakabani abayizikhulu kuhulumeni bona bangenziwa lutho.
Uma omtakabani bengaboshwa, bashushiswe, ngeke kube wubulungiswa ukuqhubeka nokushushisa uquqaba
Previous articlengibona ubudedengu obukhulu kwabomthetho
Next articleI-Covid19 imvulele ibhizinisi